जनयुद्धको गौरवको इतिहासलाई एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यभारसँग जोड्नुपर्छ : विप्लव, महासचिव, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी::Dang news portal
प्रकाशित मिति : बुध, फाल्गुन १, २०७५
प्रश्न : जनयुद्ध सुरु भएको २४वर्षलाग्दैछ । जनयुद्ध सुरु गर्दैगर्दा यहाँहरूले लिएका प्रतिबद्धताका बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि ?
उत्तर : योएकदम महत्वपूर्ण विषय हो । आज हामी जस्तो परिस्थितिमा उभिएका छौँ यहाँबाट विगत १० वर्षको जनयुद्धलाई समीक्षा गर्दा र यसका केही विषयहरू हामी सबैले देख्ने, अनुभव गर्ने र बुझ्नेगरी अगाडि छन् । पहिलो कुरा महान् जनयुद्ध राजनीतिको एउटा क्रमभङ्ग थियो । नयाँ सुरुआत थियो । एउटा थालनी थियो । त्यसको सार भनेको नेपालमा कायम रहेको सामन्ती सत्ता नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी सत्तालाई आमूल परिवर्तन र नेपाली जनताको सत्ता नौलो जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादतिर देशलाई लैजाने एउटा सुरुआत थियो । दोस्रो कुरा एउटा एकदम स्मरणीय अन्तर्राष्ट्रिय घटना के छ भने सोभियत सङ्घले धक्का खाएको समय थियो । पेरूको जनयुद्धमाकमरेड गोन्जालोको गिरफ्तारीपछि एउटा सङ्कट पैदा भएको थियो र विश्वभरि समाजवादी आन्दोलनमा एउटा अलि उतारको समय सुरु देखिन्थ्यो । अलि अँध्यारो छाएको जस्तो,वादल लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । त्यही समयमा नेपालका श्रमिक जनताहरूको विद्रोहको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले जनविद्रोह सुरु ग¥यो । त्यसले एउटा सफलता प्राप्त गर्दै जाँदाखेरि नेपालमा त जनताले जित्छन् भन्ने साबित ग¥यो । त्यतिमात्रै होइन, सही विचार, सही कार्यदिशा, सही योजना र नेतृत्व रहँदाखेरि जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सामन्तवाद पुँजीवादलाई पल्टाउन सक्ने जनताको सामथ्र्य छ भन्नेसाबित गरेको छ । तेस्रो कुरा दस वर्षमा आइपुग्दाखेरि नेपालको इतिहासमा अभूतपूर्वपरिणामहरू प्राप्त भए । जनताले पहिलोपटक आफ्नो सत्ता बनाए । सत्ता सामान्य औपचारिक मात्र होइन, व्यावहारिक र कामकाजी सत्ता बनाए । उनीहरूले सत्ताभित्र आफ्नो न्याय बनाए, न्यायप्रणाली खडा गरे । उनीहरूले सुरक्षाकालागि एउटा विशाल जनमुक्ति सेना निर्माण गरे । मिलिसिया निर्माण गरे । त्यसपछि गएर प्रशासन खडा गरे । विभिन्न खालका राज्य र अङ्गहरू निर्माण गरे, प्रशासनिक निकायहरू निर्माण गरे, वित्तिय संस्थाहरू निर्माण गरे, उद्योगहरू निर्माण गरे । शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नयाँ सुरुआतहरू गरे । यस्ता खालका अभूतपूर्व परिणामहरू दस वर्षमा प्राप्त भएर ती परिणामहरूले के साबित ग¥यो भने जनतानै इतिहासको निर्माता हो र कम्युनिस्ट पार्टीले सही नेतृत्व दिन सक्दाखेरी जनताले रातारात एउटा कायापलट, एउटा ठूलो परिवर्तनलाई हेरफेर गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित ग¥यो । यसरी हामी हेर्न सक्छौँ ।
दस वर्षपछि नेपालमा शान्तिप्रक्रिया अगाडि आयो । वार्ताप्रक्रिया अगाडि आयो । त्यो नेपाली राजनीतिको अर्को एउटा अँध्यारो कालखण्ड हो र त्यसमा जनयुद्धको गौरवपूर्ण नेतृत्व गरेको नेतृत्व नै उल्टोदिशातिर फर्कौ या जोसँग लडाइँ सुरु गरिएको थियो त्यो र जसलाई पराजित गर्दै अगाडि बढिएको थियो । त्यसकै सामु त्यही वर्ग, त्यही सत्ता अथवा दलाल पुँजीवादी वर्गको अगाडि आत्मसमर्पण गर्दै फेरि पुँजीवादतिर फर्के र नेपाली जनताले रगतको मूल्यद्वारा स्थापित गरेका उपलब्धिहरू जनताको हातबाट उल्टाइदिए । सत्ताहरू गुमे । सेना गुमे । अदालतहरू गुमे । प्रशासन गुमे । फेरि जनताचाहिँ दलाल पुँजीपति वर्गकै उत्पीडनभित्र बन्द हुनुपर्ने स्थिति आयो । यसरी एउटा कालो खण्ड अगाडि आयो । त्यसलाई त्यो कसरी जान्छ भन्ने ठूलो बहस नेपाली जनतामा थियो । सायद पुँजीवादीहरूलाई, साम्राज्यवादीहरूलाई, उत्तरसाम्राज्यवादीहरूलाई र यहाँका सामन्तवादीहरूलाईअबनेपालको क्रान्ति सिद्धियो भन्ने परेको थियो । पार्टीभित्र एउटा ठूलो बहस थियो र धेरै मान्छेहरूलाई के थियो भने क्रान्ति यहाँसम्म भयो । अब सिद्धियो भन्ने परिरहेको थियो । तर श्रमिक जनताको प्रतिनिधित्व गरेको हाम्रो टिम, हाम्रो पङ्क्तिले एउटा आत्मसमर्पणवादका विरुद्धमा, विसर्जनवादका विरुद्धमा र संशोधनवादको विरुद्धमा पुनः एउटा क्रान्तिको झन्डा खडा ग¥यौँ । त्यो झन्डा सामान्य नभएर विश्वभरिका श्रमिक जनताका बारेमा देख्नेखालको झन्डा खडा गरेर आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ । फेरी एउटा नयाँ उज्यालो अभ्यास सुरु भएको छ । हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र अहिले फेरी दलाल पुँजीपति वर्ग र नेपाली जनताको बीचमा नयाँ सङ्घर्षका किरणहरू अथवा सङ्घर्षकाप्रक्रियाहरू अगाडि आएका छन् । यो त हामी सबैले देखेका छौँ ।
उत्तर : उन्मुख होइन, एमालेत प्रतिक्रियावादी भनेर घोषणा गरेको शक्ति भयो । त्यो मात्र होइन, उहाँहरू त काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेलमा जानुभयो । काङ्ग्रेससँग नि सरकारमा पुग्नुभयो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जसलाई उहाँहरूले दुस्मन भन्नुहुन्थ्यो नेपाली जनताको सम्पूर्ण रूपमा उनीहरूको चाकरी र आत्मसमर्पणमा जानुभयो । यसको पछाडि हामीके देख्छौँ भने यसलाई पनि कनै व्यक्तिविशेषको एउटा नियतिमा नभएर एउटा ऐतिहासिक घटनाक्रमसँग हेर्नुपर्छ । अथवा नेपाली समाजको अर्थसम्बन्ध र राजनीतिक सम्बन्धकै बीचबाट हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो निष्कर्ष के छ भने प्रचण्डजी जतिवेला युवा अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र नेपाली समाजमा अन्तरविरोध एकदमै धेरै पाकेका थिए, त्यतिबेला उहाँले एउटा सम्भावना देख्नुभयो । क्रान्तिको सम्भावना, विद्रोहको सम्भावना देख्नुभयो र गर्नुभयो त्यो सकारात्मक पक्ष छ । तर हाम्रो समाज एउटा ठूलो सङ्क्रमणमा छ । पुँजीवादमा पनि युगै पुगे छैन । सामन्तवादबाट अलिकति अगाडि बढेको स्थिति, त्यतिबेला त अझ अर्धसामन्ती अवस्थामा थियो । त्यस्तो सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अर्थसम्बन्ध रहेको देशमा अथवा अर्धसामन्ती अवस्था रहेको देशमा नेताहरूका दृष्टिकोणहरू, सोचाइहरू र विचारहरू पनि सङ्क्रमणमै रहेका रहेछन् भन्ने पनि अहिले प्रमाणित भयो । त्यहाँ सर्वहारावर्गीय दृष्टिकोणको दुहाइ दिए पनि वा सर्वहारावर्गीय विचारको वकालत गरे पनि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको एउटा प्रतिनिधित्व हुँ भनेर दाबी गरे पनि त्यहाँ सम्पूर्ण रूपले कम्युनिस्टका रूपमा रूपान्तरण भइसकेको स्थिति थिएन भन्ने यसले प्रमाणित गर्छ । उहाँभित्र एउटा द्वैत थियो । एउटा कम्युनिस्ट दृष्टिकोण पनि थियो । उहाँहरूभित्र एउटा निम्नपुँजीवादी अवसरवाद पनि थियो । निम्नपुँजीवादी अवसरवादको एउटा विशेषता के हुन्छ भने परिस्थितिलाई चिर्न सकेन भने उल्टो धारातिर फर्केर विसर्जनतिर पुग्छ । त्यो प्रवृत्तिलाई हामीले विश्लेषण गरेर हे¥यौँ भने प्रचण्डजी–बाबुरामजीहरूमाविचारमा पनि, सोचाइमा पनि र जीवनमा पनिसर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोणको समग्र निर्माण भएको थिएन भन्ने कुरा साबित हुन्छ । जसले गर्दाखेरि जनयुद्धको अवधि जहाँ तपाईं जनताको बीचमा बस्नुभयो । धेरथोरजनताले लडे, कार्यकर्ताले लडे, बलिदान गरे । ठूलोत्याग भयो । त्यसको बीचमा रहँदाखेरि त मोटामोटी उहाँहरू सर्वहारा वर्गको कित्ताभित्र रहनुभयो । कम्युनिस्टभित्र रहनुभयो । जब उहाँविभिन्नखालका विजातीय वर्गहरूसँग अथवा दलाल वर्गहरूसँग, पुँजीपति वर्गहरूसँग, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका एकदम खप्पिस खेलाडी साम्राज्यवादी वर्गसँग उहाँहरू जोडिनुभयो । घुलमिल हुन जानुभयो । त्यतिबेला उहाँहरूभित्र बाँकी रहेको जो पश्चगामी प्रवृत्ति, निम्नपुँजीवादी प्रवृत्ति त्यसले उहाँहरूलाई खेद्यो अथवा खायो । उहाँहरू फर्किनुभयो । अन्ततः उहाँहरू सर्वहारा कित्ताबाट आफूलाई अर्कोदिशामा बदल्नुभयो । उहाँहरू एउटा संसदीय राजनीतिमै फर्किनुभयो । अहिले उहाँहरू हाम्रो विश्लेषणमा के छ भने दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधिका रूपमा बसिरहनुभएको छ उहाँहरू । त्यहाँ पुग्नुभयो । यसरीहेर्नुपर्छघटनाक्रमहरूलाई ।
उत्तर : यसका दुईटा पाटा छन् ।ऐतिहासिक शृङ्खलाबाट हे¥यौँ भने यो सामन्ती, नोकरशाही, दलाल पुँजीपति वर्गको सत्ताकै निरन्तरता हो । त्यसकारण यो सत्ताभित्र जनताले निरन्तर सङ्कट भोग्नुपर्ने, समस्या झेल्नुपर्ने, उत्पीडन खेप्नुपर्ने, अत्याचार भोग्नुपर्ने र विदेशी हस्तक्षेप खेप्नुपर्ने हुन्छ । यो एउटा पाटो हो । ऐतिहासिक दृष्टिले हेर्ने हो भनेनेपालमा सत्तापरिवर्तन भएको छैन । दलाल पुँजीपति वर्गकै सत्ता भएको स्थितिमा जनताले त्यहाँभित्रबाट नयाँ जीवन पाउनेकुरा सम्भव हुँदैन ।अब दोस्रो कुरा, फेरि यहाँ त केपीजी–प्रचण्डजीले कम्युुनिस्टका नाममा सरकारमा गएर समाजवाद ल्याउँछु भन्नेजस्तो गर्नुभएको छ । हामी कम्युनिस्ट नै हौँ। अब सरकारमा जान्छौँ, बहुमत दिनुस् । त्यसपछि गएर जनताको सुख र समृद्धि ल्याउँछौँ भनेर नारै दिनुभयोसुखी नेपाली समृद्ध नेपालको । यो कुरा नितान्तछलकपटपूर्ण र फट्याइँ थियोे । त्यो ‘पोलिटिकल ट्याक्टिस’ को हिसाबले, राजनीतिक कार्यनीतिका हिसाबले जनतामा दिने नारा, लोकप्रियताका निम्ति र एकछिन आँखा छल्नकालागि त त्यो भन्ने नारा भयो । ठिकै हो तर वास्तविक र व्यावहारिक जीवनमाचाहिँ त्यो परिणत हुने नारा होइन ।उहाँहरूले त्यो सक्ने पनि होइन । किनकि केपीजी र प्रचण्डजी दुवैजनाक्रान्तिको बाटोबाट विचलित भएको, भागेको, पछाडि हटेको पात्र हो । केपीजी झापा विद्रोहको बन्दुक फालेर आत्मसमर्पण गर्न जानुभयो । प्रचण्डजीत झन् अब महान् जनयुद्धका सम्पूर्ण उपलब्धिहरूलाई खरानी पारेर त्यहाँ पुग्नुभयो । जहाँबाट सुखी नेपाली समृद्ध नेपालबन्ने हो त्यही बाटो छोडेपछि उहाँले यतापटिबाट संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीवादी सत्ताको सरकारमा पुगेरसुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर भन्ने जो कुरा गर्न खोज्नुभयो त्योएकदम भ्रामक र गलत कुरा छ । हुने कुरा छैन । त्यो गलत कुरा हो । एउटा भ्रामक कुरा हो । असत्य कुरा हो । झूठो कुरा हो त्यो । त्यसैले उहाँ फेल खानुभयो । यो ११–१२ महिनामा के देखियो भने उहाँहरूपूरै असफल हुनुभयो । फेल खाने भन्नाले जनताको आँखामा फेल खानुभयो । हाम्रो त निष्कर्ष नै यही थियो त । हामी त पहिल्यै प्रचण्डसँग विद्रोह गरेर आयौँ । आउनुको कारण के छ भने यो व्यवस्था, यो प्रणाली, यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, पुँजीवादबाट यो परिवर्तनसम्भवै छैन। जनतालाई सुख दिने वा नयाँ भविष्य दिने यव नेपाललाई स्वाधीन बनाउने भन्ने सम्भव छैन भनेर त हामीले पहिल्यै भनिसकेका थियौँ । उनीहरूको पाटोमा हेर्दा त्यतिबेलासहकार्य गरेका नेताहरू सम्पूर्ण सुखसुविधा त्यागेर एउटा क्रान्तिको बाटोमा अगाडि हिँड्यौँ । त्यही भनेर फक्र्यौं । हाम्रो निष्कर्ष के थियो भने हामीले जे भन्यौँ, त्यही कुरा साबित भयो ।जनताले बुझ्छन् यो कुरा । यो हुने कुरा पनि थिएन भन्ने नै साबित हुन्छ ।
समय उपलब्ध गराइदिनुभयो, महासचिवज्यूलाई धन्यवाद छ !
स्रोतः इ-रातोखबर डट कम